SmartDocc: Mitantana Microsoft Word Repository | Martech Zone
SmartDocs: Tantano ny Microsoft Word Repository
Talata, May 31, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny ekipa Marketing B2B dia mahita fa manoratra tolo-kevitra (RFP) sy fitaovam-pivarotana ao Microsoft Word hatrany hatrany hatrany. Raha vantany vao manomboka mitombo ny orinasanao dia hitanao fa manana antontan-taratasy manerana ny toerana ianao. Mampiasa ny Google Docs ho an'ny antontan-taratasin'ny mpanjifanay sy ny fiaraha-miasa izahay. Mampiasa izahay Tinderbox ho an'ny toerana fitahirizam-bola ho anay.
Satria ny ankamaroan'ny orinasam-pandraharahana dia manohy mampiasa Microsoft Word hanoratra ny antontan-taratasin'izy ireo… tsy misy fomba mora hampiasana izany antontan-taratasy izany. Rindrambaiko ThirtySix dia orinasa isam-paritra izay naneho ny rafitr'izy ireo mifototra amin'ny teknolojia Microsoft ao amin'ny saika - fihaonambe isam-bolana izay manasongadina ny fanombohana lehibe ao amin'ny faritra.
Amin'ny fampiasana ny serivisy Microsoft Sharepoint, ThirtySix Software dia namolavola SmartDoc hamaly olana iray tena manokana - nefa goavana tokoa. Ireo orinasa lehibe manana antontan-taratasy an-taonina dia tsy nanana fitaovana fandaminana, fitadiavana ary fampidirana azy ho azy ho an'ny fampiasana samihafa. Ankehitriny dia manao amin'ny SmartDocs izy ireo. SmartDocs dia vahaolana fitantanana atiny sy atiny ampiasaina indray ao anatiny Microsoft Word.
Zava-nisongadina tamin'ny endri-javatra SmartDokes:
Leverage efa misy mpanoratra sy nankatoavina atiny hamoronana vaovao haingana Microsoft Word antontan-taratasy.
Mampiasà mora foana ny lahatsoratra, latabatra, sary ary tabilao manerana Microsoft Word antontan-taratasy.
Mampiasà lahatsoratra misy fepetra hamoronana fiovana maro samihafa amin'ny rakitra Microsoft Word tokana.
Esory ny atiny tsy mifanaraka sy lany andro amin'ny fampandrenesana fanovana mihetsika sy fanavaozana mandeha ho azy.
Miasa miaraka amin'ny lova Microsoft Word tahirin-kevitra. Tsy ilaina ny fanovana antontan-taratasy.
Miharo amin'ny rafi-pitantanana antontan-taratasy.
Tohizo ny fitahirizanao ny antontan-taratasinao amin'ny toerana ampiasainao ankehitriny.
Ny mpikambana sasany amin'ny mpihaino dia nanontany momba ny tetikasan'ilay orinasa hiasa sy hampiditra amin'ny sehatra birao hafa. Namaly ny ThirtySix Software fa tsy hisy izany drafitra izany - ny rafitra dia voasoratra ao amin'ny C #, namboarina niaraka tamin'ny Sharepoint, ary miasa manokana miaraka amin'i Microsoft Word. Miombon-kevitra amin'i ThirtySix aho fa tetika tsara ity - lafo be ny tsena ho an'i Microsoft ary be loatra ny vidiny sy ny fatiantoka mifandraika amin'ny fanimbana ny fahitan'izy ireo.
Visit Rindrambaiko ThirtySix ho fampahalalana fanampiny na fampisehoana ny rindrambaiko.
Tags: faharanitan-tsain'ny mpanjifa b2bfahafaham-po ny mpanjifa b2btatitra momba ny fantsonaJesse Staylanja mandritra ny androm-piainanaltvfahadalana
Rohy fisakafoanana mandeha ho azy WordPress
EBook maimaim-poana: Mifindra amin'ny CRM ara-tsosialy